प्रियंका सँग प्रियंका भिँड्डै, पर्दामा दुई फिल्मFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
प्रियंका सँग प्रियंका भिँड्डै, पर्दामा दुई फिल्म
फिल्मी फन्डा । आज शुक्रबारबाट दुई फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ र ‘ह्याप्पी डेज’ रिलिज भएका छन् । फिल्म स्वरदेखी फिल्म कोहलपुर एकसप्रेस सम्म आईपुग्दा केकी अधिकारीले दर्जन बढि फिल्ममा काम गरिसकेकी छिन् । फिल्ममा अभिनयसँगै निर्माताको रुपमा कलाकारहरु देखिने क्रममा केकीले पनि निरन्तरता दिएकी छिन् । प्रचार प्रसारमा आफ्नै शैली अपनाएको कोहलपुर एक्सप्रेस’ले मिडिया भन्दा पनि पब्लिक बेस बनाएर प्रचार गरेको थियो ।
फिल्ममा रिचा शर्मा, प्रियंका कार्की, बुद्धि तामाङ, रिमा विश्वकर्मा, विनोद न्यौपाने, कुशाग्र भट्टराई लगायतको अभिनय रहेको छ । कमेडी जनरामा निर्माण भएको कोहलपुरलाई दर्शकहरुले मन पाराउने आशा बढि छ । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मी बजारमा कमेडी फिल्मको बजार फराकिलो हुदै गईरहेको छ । ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’मा अर्जुन पोखरेल, कालीप्रसाद बाँस्कोटा र राजनराज सिवाकोटीको संगीत छ । त्यास्तेै लोकेश बज्राचार्यको सम्पादन, बिशाल भण्डारीको कथा तथा निर्देशन छ भने शान बस्नेतको पटकथा र संवाद रहेको छ । फिल्मलाई भद्र बहादुर शाही, देवीलाल नयौपाने (पण्डित) र शिव प्रसाद चौलागाईले संयुक्त रुपमा लगानी गरेका छन् ।
त्यस्तै आजबाट फिल्म ‘ह्याप्पी डेज पनि अलनेपाल प्रदर्शनमा आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली फिल्मले प्रचारमा नयाँ नयाँ तरिका अपनाउने क्रममा फिल्म ‘ह्याप्पी डेज’ले पनि विभिन्न तरिका अप्नाएर आफ्नो प्रचार प्रसार गरेको थियो । यस फिल्मले पनि केही दिन अघि उपत्यकामा रथ यात्रा गरेर प्रचार प्रसारका लागी कलाकारसहितको टोलीलाई ललितपुर र काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा रथ चढाएर घुमाएको थियो ।
चाम्स इन्टरटेनमेन्ट र लन्डन सिने आईको व्यानरमा निर्मित सिनेमामा दयाहाङ राई, प्रियंका कार्की, संजय गुप्ता, दीया पुन, विक्की जोशी, शिशिर राणा, रुपा पुन, रिकेश चाम्स र जेन बकल अभिनय छ । साढे २ करोडको बजेटमा निर्माण भएको यस फिल्ममा बिपी खनाल, भवानी शर्मा, हिराल जोशी, मिलन चाम्स र डा. अशोक खनाल निर्माताका रुपमा रहेका छन् । केही दिन अघि मात्र फिल्म युनिटले सामाजिक सञ्जाल युट्रयुव मार्फत आफ्नो तेस्रो गीत सुस्त यो बोलको गीत सार्वजनिक गरेको थियो । यस फिल्मले पनि सबै गीत र ट्रेलर रिलिजबाट सकारात्मक प्रतिक्रियहरु नै पाएको छ ।